समयमै गम्भिरतापुर्वक सोच ? | सप्तरी जागरण
समयमै गम्भिरतापुर्वक सोच ?
Posted by वैद्यनाथ यादव on May 23, 2016 in सम्पादकीय
संविधानमा असहमतिका साथ मधेशवादी दलहरुले सात महिना सम्म लगातार आन्दोलन जारी राखे । आन्दोलनकारीलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्दै सरकारमा सहभागी प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जायज माग वार्ता र सम्वादबाट पूरा गरिने आश्वासन समेत दिए ।
वार्ताको आह्वान भएपछि आन्दोलनकारी दलहरु पटक–पटक वार्तामा बसे पनि । तर, सरकारले आफूहरुको मुद्दामा विषय प्रवेश नै नगरिकन समय बर्वाद गरेको, झुलाउने गरेको भन्दै मधेशवादी दलहरुले प्रतिक्रिया जनाए । समस्याको अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । त्यसकै कारणले दलहरुले पुनः जेष्ठ देखि आन्दोलनको घोषणा गरि सकेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेर राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिने उद्घोष गरि सकेका छन् । सरकारले वार्ताका लागि सरकारी स्तरबाट उप–प्रधान तथा स्थानीय, परराष्ट्र मन्त्री कमल थापालाई वार्ता गर्न संयोजक तोकेको छ ।
थापा संघीयता विरोधी हुन भन्दै मधेशवादी दलहरुले उनीसित गरेको वार्ताबाट आफुहरुको समस्या सम्बोधन हुने विश्वास गर्न सकिरहेका छैन । महिनौ अगाडी गठन गरिएको समितिलाई अहिलेसम्म पूर्णता पनि दिइएको छैन ।
३६ पटक वार्तामा बस्दा पनि माग बारे कुनै सुुनुवाई नभएको भन्दै आन्दोलनकारी दलहरुले वार्ताको कुरा सरकारको अलमल्याउने चाल मात्र रहेको बताउन थालेका छन् ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा समस्याको टुंगो लगाउने तिर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । सात महिना लामो मधेस आन्दोलन पछि पुनः राजधानी केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गर्नुलाई गम्भिरतापुर्वक लिएर समयमै निकास नखोजिए स्थिती अझै भयावह हुन वेर लाग्ने छैन ।